समाचार - उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको लागि आदेशहरू!
२०२० मा उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स ब्लाउट! सीमा पार सदाबहार कोटी हालको तातो वस्तु बनेको छ।
यस बहाव हुनुभन्दा धेरै अघि उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनहरू धेरै नै लोकप्रिय भइसकेका थिए जुन २०२० मा अमेरिकाको खुद्रा ई-वाणिज्य बिक्रीको २२% हिस्सा रहेको छ। यस वर्ष १ 156..5 अर्ब अमेरिकी डलर, र यस कोटीमा बेचेको आधा उत्पादनहरू मध्ये आधा (.5 online।%%) अनलाइन खरीद मार्फत पूरा हुनेछ।
EMarketer बाट स्रोत
उदाहरणका लागि अमेरिकी बजार लिने, अमेजन उत्पादन खोजको आधा (%१%) भन्दा बढि इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू हुन्। अमेजन खरिदकर्ताहरूले विशिष्ट ईलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू रूचि (जस्तै आईफोन, निन्टेन्डो स्विच) को खोजी गर्नेछन् र विशेष ब्रान्डको नयाँ सूचनामा ध्यान दिन्छन्।
व्यवसाय आन्तरिक, Ahrefs बाट स्रोत
उच्च बजार उत्साह पछि के कारण छ?
लामो समय मा, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन भविष्यमा क्रस-सीमा सदाबहार कोटी र शिखर मौसम तातो आइटम को दुई प्रमुख भूमिका खेल्न जारी छ। कडा आपूर्ति र मागको पछाडि मौलिक कारण अझै अन्वेषण लायक छ। यस सन्दर्भमा, उद्योग ईन्साइडर सामले विक्रेता, कारखाना, र बजार आयामको दृष्टिकोणबाट निम्न प्रभावकारी कारकहरूलाई अगाडि राख्छ:
प्लेटफर्मले बिस्तारै पुनःपूर्ति प्रतिबन्धहरू ढीला गर्‍यो: जब अमेजन प्राइम डे भर्खर समाप्त भयो, धेरै विक्रेताहरू स्टक बाहिर बेचिए। तसर्थ, पुनःपूर्ति को मांग अस्थायी वृद्धि भयो। थप रूपमा, विक्रेताहरू आफ्नो सूचीलाई फेरि भर्न हतार गरे किनभने अमाजोनले बिस्तारै पुनःपूर्ति नीति खोलेको कारण पुनःपूर्ति गर्ने स्थिति ढिलो भएको छ।
को पहिलो आधा मा 2020, विक्रेता कोटिहरू विस्तार र रूपान्तरण: उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स सधैं एक सदाबहार कोटी भएको छ बिना सीमा क्रस-सीमा उत्साहको साथ। महामारीको समयमा, अन्य कोटीहरूको बिक्री घट्नेबाट प्रभावित, अधिक र अधिक विक्रेता उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनहरूका लागि उत्पाद विकासको दिशालाई लक्षित गर्दैछन्। विश्वव्यापी अनलाइन उपभोग गर्ने बानी बदल्दै नयाँ विक्रेताको आपूर्तिको माग बढेकोले मूल बजारमा आपूर्ति र मागको सन्तुलन पनि तोडिएको छ।
म्युचुअल इन्टरप्ले उद्योगको अपस्ट्रीम र डाउनस्ट्रीम बीच: उदाहरणको रूपमा मोबाइल फोनका सामानहरू लिदै। Huawei, Apple, Xiaomi, आदि जस्ता प्रमुख मोबाइल फोन ब्रान्ड, द्वारा शरद globalतु ग्लोबल नयाँ उत्पाद सुरुवातको प्रभावलाई धन्यवाद, मोबाइल फोन ब्रान्ड पछाडि डाउनस्ट्रीम आपूर्तिकर्ताहरू पनि द्रुत लेनमा प्रवेश गरेका छन्। Yiwu उत्पादकहरूले एप्पल को व्युत्पन्न व्यवसाय वास्तव मा उग्र छ कि प्रकट गर्नुभयो! “आईफोन १२ को प्रि-सेल अवधिको अवधिमा, केही विक्रेताहरूले आदेशहरू मिलाउनको लागि कारखाना फेला पार्नको लागि मोबाइल फोन केस मोल्ड लिइसकेका छन्। त्यहाँ मोबाइल फोन केसहरूको लागि १० भन्दा बढी अर्डरहरू छन्, र ती नोभेम्बरको अन्तमा निर्धारित गरिएको छ। "उही समयमा, प्रत्यक्ष प्रसारण, भिडियोहरू, र अनलाइन कन्फरेन्सको बढ्दो मागको कारण, खेल P5 को सुरुवात, छुट्टी इलेक्ट्रोनिक उपहारहरूको समृद्धि र वस्तुहरूको बुद्धिमान इन्टर्नेटको लोकप्रियता, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्सले विस्तारित परिधीय उत्पादनहरू पनि बढेको छ।
चिनियाँ प्रविधिको प्रतिस्पर्धी फाइदाहरू: वास्तवमा, हालसालैका वर्षहरूमा चीनको बहुआयामी स्मार्ट वेराएबलहरू र स्मार्ट वाचले कमजोर विदेशी इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूलाई कम गरिरहेको छ, जस्तै सिंगल-फंक्शन हार्ट रेट मोनिटर, फिटनेस ट्र्याकरहरू, र नेभिगेसन उपकरणहरू। यस आधारमा कि चिनियाँ उत्पादनहरुमा टेक्नोलोजिकल एकाधिकार र प्रतिस्पर्धी फाइदाहरु छन्, markets जी, टीडब्ल्यूएस, र वायरलेस फास्ट चार्जर प्रयोग गर्ने उत्पादनहरुका लागि विदेशी बजारबाट प्राप्त आदेश प्राकृतिक रुपमा चीनमा प्रवाहित हुनेछ।